रहस्यमै श्रीदेवीको मृत्यु, आखिर के–के भएको थियो त्यो रात कोठा नं २२०१ मा ? | Lifemandu
श्रीदेवीको मृत्युको केस शुरुमा जति सीधा र सरल देखिएको थियो समयसँगै यसले नयाँ–नयाँ रहस्यको पर्दा थप्दै गयो । शुरुमा उनको मृत्यु ‘कार्डिएक अरेस्ट’ को कारण भएको भन्ने रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यसको लगत्तै भोलिपल्ट उनको मृत्युको कारण ‘बाथटब’ मा डुबेर भएको भनियो । विवादित रिपोर्ट सार्वजनिक हुँदै गर्दा धेरैलाई शंकाको विषय बनेको उनको मृत्युको रहस्य आखिर के हो त ? यो बारे अझै पनि धेरै उल्झनहरु यथावत नै छन् ।
पहिलो प्रश्न : किन श्रीदेवी ४८ घण्टासम्म कोठामा थुनिइन् ?
दोस्रो प्रश्न : उनको मृत्यु राति १० बजे भएको थियो तर कसरी ९ बजे पुलिस त्यहाँ पुग्यो ?
तेस्रो प्रश्न : अन्तिममा श्रीदेवीसँग को थियो ?
यो तीन प्रश्नले उनको मृत्युलाई अझै रहस्यमय बनाएको छ । पोस्टमार्टमभन्दा पहिले उनको मृत्यु ‘कार्डिएक अरेस्ट’ भनिएपनि पोस्टमार्टम रिपोर्टपछि कारण नै बदलियो । अहिले सम्म उनको मृत्युबारे कुनै पनि आधिकारिक तथ्यहरु बाहिरिएको छैन । अन्तिम समयमा उनको साथमा को थियो र अस्पताल जादाँ उनीसँग को–को गएका थिए ? यो प्रश्नको आजसम्म पनि कुनै उत्तर भेटिएको छैन ।
एजेन्सी । बलिउड नायिका श्रीदेवीको निधन भएको छ । शनिबार राति दुबाईमा उनको हृदयघातको कारण निधन भएको हो । यसको पुष्टी श्रीदेवीका देवर सन्जय कपुरले गरेका हुन् । बलिउडकी पहि